Ataköy İkitelli Metro ichaiswa mukushanda muna 2021 | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulAtaköy İkitelli Metro ichaiswa mukushandiswa muna 2021
20 / 05 / 2020 34 Istanbul, Railway, PHOTOS, GENERAL, KENTİÇİ Rail Systems, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, Metro, TURKEY
atakoy ikitelli subway ichaiswa mushumiro
Ekrem İmamoğlu, Meya weIstanbul Metropolitan Municipality (İBB), vakapinda muchirongwa chekubikira vezvitima yakarongedzerwa Ataköy-İkitelli Metro, iyo ichasanganiswa neMarmaray, tambo ina metro mana-inoshanda muguta. Achitaura mumaraini mushure mechiitiko chakaitirwa ku İkitelli Sanayi Metro Station, İmamoğlu akataura kuti mutsetse uyu uchatanga kushanda nezvikamu zvidimbu muna 4, "Muchikamu chekutanga cha2021, ndinovimba kuti mutsara uyu uchaiswa mushando neIstanbul yeruzhinji seyakakosha Marmaray. Tichava takunda. ”
Ekrem İmamoğlu, Meya weIstanbul Metropolitan Municipality (İBB), vakapinda muchirongwa chechitima che weld for Ataköy-İkitelli Metro, iyo ichasanganiswa nemashanu mitsetse metro inoshanda muguta. İmamoğlu apinda mhemberero yakaitirwa ku İkitelli Sanayi Metro Station paBaşakşehir-Olimpiyat-Kirazlı Metro Line uye PresidentBB President Anopa uye SözcüSü Murat Ongun, Metro Inc. General Manager Özgür Soy uye İBB Rail Systems department Musoro Pelin Alpkökin vakaperekedzwa. Mumugero werinotemwa, Imamoglu yakagamuchira ruzivo nezve mabasa kubva kuAlpkökin uye makambani ekambani makambani. İmamoğlu, aiita yekuwachidzira njanji nekupfeka magurovhosi akasarudzika uye magirazi, akaita ongororo yake pamusoro pemtsetse uri mumaraini. Imamoglu akati:
"TINODA IZVI IZVI"
“Tinoda zvakadzika izvi. Nekuti izvozvi zvinoreva kuti basa rakapera. Isu tinofara zvakare. Zvinoreva kuti mugwagwa uri pakati, kunyangwe wave kuda kupera. Yedu Ataköy-İkitelli mutsetse, kwatiri iko kuchinjiko chechitima mazuva ano, ndiwo mutsara unokosha kwatiri. Kunyanya neIkitelli kumira kuti tiri kubatanidza ikozvino, tiri kubatanidza mitsara miviri uye tine tariro isu tichaiisa mukushandira gore rinouya nemayera matatu pano. Isu tine hanya nechinhu ichi. Isu tiri mukudzidza kwakasimba. Ichatakura zviuru makumi matatu nezviuru zvevatasvi munzira imwechete. Munzvimbo ino yakabatikana, kunyanya vashandi vedu vanoshanda kwazvo. Naizvozvo, ichi chichava tambo inoshanda. Paive nematambudziko epasi; asi pano vese vandaishanda navo nekambani yedu yemakondirakiti vakaita maitiro akaomarara uye takunda matambudziko ane chekuita neiyo pasi. Tunnel boring muchina (TBM) unoita yayo yekupedzisira mabasa mutsetse uyu; Anenge apedzwa naJune. Mushure meizvozvo, isu tichanyanya kutarisa pane zvemagetsi zvemagetsi. Muzvinhu zvese izvi, isu tinomutsa maitiro nemaitiro emari yekambani yedu kontrakita, kwatinoshanda chaizvo nekufamba munzira, uye nekutenda kwevangu vatambi vekufamba muchirongwa ichi. Kumwemedza chikamu kunopa zvakare kwakasiyana kukurudzira pano. Muchikamu chekutanga cha3, ndinovimba kuti nekushandisa iyi line, tichava takaunza mutsara wakakosha unobatanidzwawo kuMarmaray kuvanhu veIstanbul se İBB. "
Pachave nezviteshi gumi nemumwe izvo zvichapfuura kubva kumatunhu mashanu
Kana Ataköy-Basın Ekspress-İkitelli Metro Line painopera, neOlympic-Ikitelli Industrial chikamu cheBaşakşehir-Olimpiyat-Kirazlı Metro Line ku İkitelli Industrial Station; PaMehmet Akif Station Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt Metro Line; Yenikapı-Kirazlı- paMimar Sinan StationHalkalı Iyo ichave yakabatanidzwa neMetro Line uye Marmaray Line kuAtaköy Station. Pane 13,5 makiromita marefu mutsetse; Kuchava nezviteshi gumi nematanhatu mukati memiganhu yeBakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece uye Başakşehir matunhu. Iyo nguva yekufamba yemutsara, iyo inotakura zviuru makumi maviri nezvisere zvevatakuri munzira imwe chete paawa, ichave maminetsi makumi maviri nemaviri kubva pachiteshi chekutanga kuenda kuchiteshi chekupedzisira.
Ataköy-İkitelli metro ichadhura 850 mamiriyoni eras
İkitelli-Ataköy and Dudullu-Bostancı metro lines to tender
Ikitelli - Ataköy Metro Line kuvakwa kwejekita uye electromechanical inoshanda nyoro…
ray yekubikisa mhemberero
Ikitelli - Atakoy Metro Line Project yekambani yakashambadzirwa
İkitelli - Ataköy Metro Line Project yakapiwa Aga Enerji